Sakhiwa kanjani isakhiwo sethambo lamahhashi | Amahhashi eNoti
UJenny monge | | Izinhlobo zamahhashi
Njengomphumela wokuziphendukela kwemvelo ukwakheka kwamathambo kwamahhashi Kube nezinguquko ezithile. Lezi zinguquko zibonakala kakhulu emaphethelweni azo, okwenza iminwe yehliswe ibe yodwa nje ezungezwe ngezinto ezinama-horny ezaziwa ngokuthi i-helmet noma ingilazi.
Emaphethelweni angaphambili, i-ulna ne-radius ijoyinile, kwaveza ithambo elilodwa, kwenzeka okufanayo nange-tibia ne-fibula, kuvimbela izandla nezinyawo ekujikeni ngasemuva.
Njengamanje amathambo we amakhanda amahhashi made futhi zinobuso obuphinda kabili ubude bokhakhayi. Umhlathi nawo unwetshiwe, unendawo ebanzi futhi eyisicaba engxenyeni engezansi yendawo engemuva.
Amahhashi anezinyo okungenani ezingama-36 okuyi-12 kuwo angama-incisors nama-24 angama-malar. Ikholomu yakho yomgogodla yakhiwe ngama-vertebrae angama-51.
Amathambo ehhashi akhiwa ngamathambo angama-210, La mathambo afeza umsebenzi wokuba ukwesekwa kwemisipha, ukuvikela izitho zangaphakathi nokuvumela ukuhamba ukuze ikwazi ukulawula isivinini esihlukile.
1 Ukuguquka kwamathambo ehhashi
2 Izitho zomzimba zamahhashi
3 Inhloko yamahhashi
4 Intamo yamahhashi
5 Isiqu se-equines
Ukuguquka kwamathambo ehhashi
Amathambo aguqulelwe ukwanelisa imisebenzi ehlukene.
Amahhashi, njengezinye izilwane, ziye zavela kuwo wonke umlando wayo, it Kusho ukuthi isakhiwo sakho samathambo besilokhu sishintsha. Lezi zinguquko zingabonakala ikakhulukazi emaphethelweni ama-equine, yize etholakala kwezinye izingxenye zamathambo abo.
Ngenxa yokufuya kwabo nemisebenzi abayinikwe abantu, amahhashi angalimala ezingeni lemisipha noma lamathambo, ngakho-ke kubalulekile ukwazi ukuthi unjani umzimba wakho nokuthi iziphi izingxenye ezithambekele kakhulu ekulimaleni, ukuze ukwazi ukukugwema Ngendlela elula.
Uma ufuna ukwazi kabanzi ngokuvela kwamathambo kwama-equines, qhubeka ufunda ukuthi sizokutshela ngakho ngezansi.
Umzimba wama-equines uhlukaniswe waba: ikhanda, intamo, isiqu kanye nemikhawulo.
Kuphelele amathambo amahhashi akhiwe cishe ngamathambo angama-210 nomgogodla uqukethe Ama-vertebrae angama-51. Kuma-vertebrae, i-7 ingumlomo wesibeletho, i-18 thoracic, i-6 lumbar ne-15 caudal. Amathambo anomsebenzi wokuxhasa imisipha, kanye nokuvikela izitho zangaphakathi nokuvumela ukuhamba ukuze bakwazi ukulawula isivinini esihlukile.
Iqiniso elimangazayo ukuthi amathambo amahhashi awanawo ama-clavicles. Esikhundleni salokho, indawo yezingalo zangaphambili inanyathiselwe emgogodleni ngemisipha, imisipha nemisipha.
Izitho zomzimba zamahhashi
Siphawule ukuthi emaphethelweni kutholakale ushintsho olukhulu kakhulu, lokhu kubonakala emilenzeni yangaphambili lapho i-ulna nerediyasi behlanganiswe ithambo elilodwa. Okufanayo kuya ku-tibia ne-fibula. Esimweni sokugcina, ukuhlangana kwala mathambo kuvimbela ama-equine ekuphendukiseni izandla nezinyawo zawo ngasemuva. Ukukhuluma ngezandla nezinyawo iminwe yehliselwa kokukodwa ezungezwe ngezinto ezinama-horny okuthiwa isigqoko sokuzivikela noma ingilazi.
Imikhawulo engaphambili yilezo ezithwala iningi lesisindo somzimba wehhashi.
Ikhanda lingenye yezingxenye zamahhashi ezizwakalayo futhi futhi lingenye yezingxenye zamathambo eziguqukile. Njengamanje, amathambo akha ikhanda lehhashi aluleke kakhulu futhi zinobuso obunobude obuphinda kabili ubude bamathambo ogebhezi. Umhlathi nawo usululiwe, enendawo ebanzi futhi eyisicaba engxenyeni engezansi yendawo engemuva.
I-Ternilla, okuyindawo evulekile futhi eqinile phakathi kwamehlo.
I-Chamfer, ingxenye yesikhathi eside eya enkonyane enqamula iso kanye namakhala.
Imicengezi noma i-fossae yesikhashana, yizimpawu ezimbili ezitholakala ohlangothini ngalunye lwamashiya.
Barba, ingxenye yamakhona wezindebe.
IBelfos, udebe oluphansi. Yindawo ebucayi kakhulu.
Umhlathi, Ingxenye engemuva yomhlathi we-equine.
Emlonyeni, amahhashi anezinyo okungenani ezingama-36 okukhona kuwo ama-incisors ayi-12 kuthi ama-molars angama-24.
Intamo ye-equine inayo isimo se-trapezoidal, ngesisekelo esinciphile lapho kuhlangana khona ikhanda nobubanzi esiqwini.
Intamo inomsebenzi obaluleke kakhulu kusukela lapho ingenela kubhalansi yama-equines.
Ingxenye lapho ama-manes ahlangana khona ingaqondile, i-concave noma i-convex ngokuya ngohlobo lwe-equine. Iqiniso elifuna ukwazi ngama-manes ukuthi agcwele kakhulu abesilisa kunabesifazane.
Akuyona kuphela indawo enkulu kakhulu ye-equine anatomy, kodwa futhi kunika ezinye izimfanelo noma ezinye amahhashi ngokuya ngokuma kwawo kanye nesidumbu.
Isifunda se-thoracic vertebral esivumelana nendawo yokubuna kanye nangemuva, kanye nesifunda se-lumbar esivumelana nokuphela komhlane kanye nesigaxa, bangahle balimale njengoba kuyindawo lapho kubekwa khona isihlalo.
Indawo ehlangene ehlombe nayo ingalimala kaningi kuma-jumping jacks.
Es kubalulekile ukuthi umgibeli athinte indawo yomgogodla njalo ukuze ahlole ukungakhululeki okungaba khona esilwaneni nokuthi zingelashwa ngesikhathi.
Ukugwema ukulimala, umgibeli kufanele agweme ukugibela ngqo ehhashini ngokushesha nje lapho bephuma esitebeleni, njengoba kubekwa isisindo esikhulu kubo ngokuzumayo.
Umboko uhlukaniswe waba izingxenye eziningana:
Cruz, indawo ephakeme nemisipha ekugcineni kwentamo. Yile ndawo ekala ukuphakama kwamahhashi.
Emuva, inqamula nesiphambano ngaphambili, nezinhlangothi ezinhlangothini nomgogodla ngemuva.
Khipha, indawo yezinso.
Iqembu, indawo yokugcina engemuva enqamula umsila.
Ngokuvamile, izinhlangothi ze-croup.
UCincheraUnqamula ngaphambili ngamakhwapha nangemuva kwesisu.
Izinhlangothi noma izinhlangothi, esiswini, ngaphambi kwezintambo.
Njengoba sibona, amathambo abelokhu eshintsha, kepha kungani lezi zinguquko? amahhashi abelokhu eshintsha ukuze anelise imisebenzi ehlukene.
Kumele kucatshangwe ukuthi ngokuya ngezinhlanga kungaba nokuhlukahluka okuthile kwezinye izindawo ze-anatomy.
Indlela ephelele ye-athikili: Amahhashi kaNoti » abanye » Izinhlobo zamahhashi » Isakhiwo samathambo amahhashi
Sinjani i-circulatory system yehhashi